किन हुन्छ प्रदेश एकको संसद अवरुद्ध, गाँठो फुकाउन के गर्ने ? - Baikalpikkhabar
किन हुन्छ प्रदेश एकको संसद अवरुद्ध, गाँठो फुकाउन के गर्ने ?
विराटनगर । प्रमुख विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलगायतको लगातारको अवरोधका कारण प्रदेश १ संसद आज पनि सुचारु हुन सकेन ।
विपक्षी दलहरुले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहँदा सरकारले भने उक्त अवरोध हटाउन कुनै सार्थक पहल गर्न सकेको छैन । विपक्षी दलहरूले चालू आर्थिक वर्षका स्वीकृत कार्यक्रमहरु सुचारु गर्न, चालु विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन, अलपत्र रहेका बहुवर्षे विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले भने बजेट अभावको कारण देखाएर ती सबै आयोजना रोकेको छ ।
संसदमा भएको अवरोध खोल्न भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन रार्इले आज बिहान आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको संसद बैठकमा विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेका थिए ।
जनता समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले सदनमा उठेका मुद्दा सम्बोधनमा वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभामा आउन आग्रह गरे । उनले बोले लगत्तै विपक्षी दलहरुले उठेर विरोध गरेर सदन चल्न नदिएका हुन् ।
त्यसपछि उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले प्रदेश सभा बैठक वैशाख ५ गतेसम्मका लागि स्थगनको घोषणा गरेकी थिइन । आजसहित सदन अवरोध भएको यो तेस्रो दिन हो । यसअघि २६ र २७ गते चैतमा पनि सदन अवरुद्ध भएको थियो ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले विपक्षीको जवाफ सदनमा दिने र त्यसको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षीहरुले समस्या समाधानको निश्चितता बेगर सदन चल्न नदिने बताएपछि बैठक निष्कर्ष बिनै टुंगिएको थियो ।
सोमबार, ३० चैत, २०७७, साँझको ०५:३० बजे
बैशाख २४, दमक / झापामा शुक्रबार १३५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको जानकारीमा शुक्रबार ५४ महिला र ८१ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । शुक्रबारका संक्रमितहरुमा बिर्तामोड २५, दमक र कनकाई २०/२०, भद्रपुर १७, मेचीनगर र
उर्लाबारी/ उर्लाबारीको एभरेष्ट फनपार्कमा १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने ब्यक्तिको पहिचान भएको छ । ती ब्यक्ति दमक निवासी दुर्गा पौडेल भएको खुल्न आएको छ । यद्यपि उनको उमेर र वार्ड नम्बर खुलेको छैन । पौडेलले बालिका लाई गत बैशाख ९
दाइजोमा मोटरसाइकल नपाउदा मन्डपमै बेहुली छोडेर टाप
मोरङ / झण्डै २ वर्षअघि दाइजो नदिएको निहुँमा मण्डपमै बेहुली छोडेर हिडेका मोरङ जहदा गाउँपालिका ४ कविलासाका लक्ष्मण राजवंशीले अर्को विवाह गर्न लागेका छन् । राजवंशीले २ वर्षअघि २०७६ साल जेठ ३ गते जहदा ३ जयरामपुरकी सुमित्रा राजवंशीसँग विवाह गरेका
काठमाडौं,बैशाख २४, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि...